Izindaba - Icwecwe Lokugaya Idayimane Lokugaya Ukhonkolo, Terrazzo, Stone Surface
Incazelo yobungcweti ye idayimane ukugaya disc ibhekisela kuthuluzi lokugaya i-disc elisetshenziswa emshinini wokugaya, owakhiwe umzimba we-disc kanye nengxenye yokugaya idayimane. Izingxenye zedayimane zishiselwe noma zifakwe emzimbeni wediski, futhi indawo yokusebenza efana nokhonkolo nephansi lamatshe ipholishwa kahle ngokujikeleza kwesivinini esikhulu somshini wokugaya.
Ngenxa yezici zama-abrasives wedayimane, ama-abrasive edayimane asephenduke amathuluzi afanelekile okugaya izinto eziqinile nendawo yaphansi. Akukhona nje kuphela ukusebenza kahle okuphezulu, ukunemba okuphezulu, kodwa futhi anoburhalarhume obuhle, ukusetshenziswa kwe-abrasive okuphansi, nempilo ende yesevisi. Kungase futhi kuthuthukise izimo zokusebenza.
Amadiski okugaya idayimane ngokuvamile asetshenziselwa ukupholisha imabula, igwadle, izitsha zobumba, amatshe okwenziwa, njll., ikakhulukazi ukwakhiwa kwezindonga zikakhonkolo zangaphandle zokuhlobisa, ukulinganisa kwendawo kwaphansi kanye namapuleti okuhlobisa e-marble kanye ne-granite. Inezinzuzo zejubane lokugaya ngokushesha nempilo ende.
Ngezansi kungenye yamapuleti okugaya amadayimane ajwayelekile, alingana neningi lama-grinder ekhanda elilodwa angama-250mm (Blastrac BGP-250 kanye ne-BGS-250 /Norton Clipper GC250 / DFG 400 /TCG 250), ngokuvamile sishisela ama-pcs angu-20 40* Amasegimenti kanxande angu-10*10mm, uma udinga ezinye izinhlobo zengxenye noma izinombolo, singakwazi nokwenza ngokwezifiso isisekelo esicelweni sakho. Amagrits 6#~300# ayatholakala. Ibhondi ethambile, ibhondi emaphakathi, ibhondi eqinile ingakhethwa ukuthi ilingane nendawo ehlukile yesitezi esiqinile. Ikakhulukazi isetshenziselwa ukugaya ukhonkolo, i-terrazzo kanye netshe letshe, futhi ingasetshenziselwa i-epoxy, iglue, ukususwa kopende.
Okulandelayo eminye imiklamo eyengeziwe yamapuleti okugaya idayimane ukuze uthole inkomba yakho.
Ngaphandle kwediski yokugaya idayimane, siphinde sikhiqize zonke izinhlobo zamathuluzi edayimane, njenge izicathulo zokugaya idayimane, amasondo enkomishi yedayimane, amaphedi okupholisha idayimane, pcd amathuluzi okugaya njll. Uyemukelwa embuzweni wakho.